अहिलेसम्मको महान मार्केटिंग उपकरण! | Martech Zone
बुधबार, नोभेम्बर 11, 2009 मंगलवार, नोभेम्बर 10, 2009 एडम सानो
होइन, म नयाँ महान र अद्भुत प्रविधि, वेबसाइट, वा अन्य मार्केटिंग सिल्भर बुलेट अनावरण गर्न गइरहेको छैन जुन तपाईंको कम्पनीलाई सुपर स्टारडममा रोकेट गर्दछ।
म कुरा गर्दैछु महान ग्राहक सेवा। यो स्पष्ट छ जस्तो देखिन्छ। सबैलाई थाहा छ कि महान ग्राहक सेवा तपाईको व्यवसायलाई बढाउनको लागि एक प्रमाणित विधि हो, तर मैले के देखेको छु, धेरै कम्पनीहरूले यसलाई बिर्सेका छन्। यदि तिनीहरूले यो बिर्सेका छैनन् भने, कम्तिमा उनीहरूले आफ्नो खुसी ग्राहकहरूको आवाजलाई उनीहरूको व्यवसाय बढाउन सक्षम हुने अवसर हराइरहेका छन्।
सबैको ग्राहक सेवा बारे आफ्नै डोरर कहानी छ र सबैको आफ्नै ग्राहक सेवाको आफ्नै कहानी छ। बजारका रूपमा, हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि यी कथाहरू प्रत्येक दिन सम्भावित ग्राहकहरू र ग्राहकहरूलाई भनिन्छ। र अब - सोशल मिडियाले यी कुराकानीहरूमा विस्तार ल्यायो!
ग्राहक सेवा दुबै तरीकाले काट्ने शक्ति छ। त्यो नराम्रा कहानीसँग नयाँ सम्भावनाहरू र अवस्थित ग्राहकहरूलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू पठाउने शक्ति छ। त्यो महान कथा नयाँ ग्राहकहरु र बिक्री वृद्धि ल्याउन सक्छ। खराब काम रोक्नको लागि ग्राहक सेवा सुधार गर्ने यो तपाईंको काम हो, र राम्रो विस्तार गर्नको लागि बुलहर्न प्रदान गर्नुहोस्!
त्यसोभए कहानी कसरी भनिएको छ भनेर हामी कसरी पक्का गर्ने? हालसालै, मैले केहि सस्तो, व्यावहारिक तरिकाहरू देखेको छु कि निश्चित भइरहेको कि कहानी भनिएको छ। मलाई थाहा भएको एक कम्पनीले ग्राहकहरूलाई कम्पनीको ब्लगमा उनीहरूको कथाहरू लेख्न र पोष्ट गर्न अनुमति दिइरहेको छ र पढ्नको लागि कसैलाई पनि साझा गर्न।
केही कम्पनीहरु मा ग्राहकहरु को नेटवर्क शुरू गरीएको छ निing्ग प्लेटफर्म। तिनीहरू यी नेटवर्कहरू एक ज्ञान आधार, फोरम, मद्दत डेस्क र प्रशंसापत्र साइट सबै एक मा प्रयोग गर्दैछन्। यो एक उत्तम तरिका हो ग्राहक अनुभव समग्र र आफ्नो कम्पनी को महान ग्राहक सेवा को सही कहानी चित्रण।
त्यसोभए तपाईं यो सुनिश्चित गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईंको सम्भावितहरूले तपाईंको महान ग्राहक सेवाको बारेमा सुनेका छन्?
टैग: लौरा लिप्पेWordPress
नोभेम्बर २०, २००। 11::2009 अपराह्न
धन्यबाद, धन्यबाद, धन्यवाद मलाई विश्वास छ कुनै पनि टेक्नोलोजी छलफलको साथ कोठामा हात्ती सधैं मानिसहरूलाई बिर्सिने छैन जुन तपाईं आफ्नो प्रविधि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं व्यक्ति बिर्सनुभयो भने विश्वको सबै महान प्रविधि तपाईंको विचारलाई लाभदायक वा लाभदायक बनाउन सक्दैन।
जुली, धन्यवाद! मँ सहमत छु, टेक्नोलोजी केवल उसको प्रयोग गर्ने व्यक्तिको जत्तिकै राम्रो छ।
यो पर्याप्त भन्न सकिदैन। र अझै कम्पनिहरु * अझै पनी "यसलाई प्राप्त छैन। यो त्यस्तो कुरा हो जुन हामी हाम्रो ब्लगमा बढी कुरा गर्न थाल्छौं, र हामी कसरी गहिरो खुदाईदै गइरहेका छौं कसरी ठ्याक्कै कम्पनीहरूले कसरी सामाजिक मिडिया मार्केटिंगबाट सामाजिक मिडिया ग्राहक सेवामा जान सक्दछन्, तर म अझै पनी सोच्दछु कि पहिलो चरण भनेको कम्पनीहरूलाई सम्झाउने हो त्यो ग्राहक सेवा त्यहाँ उत्तम मार्केटिंग उपकरण हो।
मैले याद गरें कि ग्राहक सेवाहरूको वास्तवमा ख्याल गर्ने कम्पनीहरूले सोशल मीडियाको प्रयोग एकदम प्रभावकारी रूपमा गर्न थालेका छन्। समीक्षा साइटहरूमा सूचीबद्ध गरिएकोदेखि लिएर ग्राहकहरूको हुन सक्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन, र सार्वजनिक रूपमा उत्पादन गुनासोहरू र उनीहरूको समाधान स्वीकार्नुहोस्। हो, यो लामो बन्नु अगाडि लामो बाटो छ।
ठीक छ आदम। पा wheel्गललाई पुनर्निर्मित गरिँदै छैन, यसलाई सजिलै सार्नको लागि मोल्ड गरिएको छ। Aपउल
ग्राहक सेवा ती चीजहरू मध्ये एक हो जुन सँधै सराहना गरिन्छ र अधिक मूल्यवान छ। तर अझै म तिनीहरूलाई फ्लिप-फ्लप भएको हेर्न चाहन्छु। सकारात्मक ग्राहक सेवा प्रतिष्ठा पाउँदा कम्पनीहरूले चिप्लन्छन् तर तिनीहरूले त्यो अक्षांश कमाए।
केही कम्पनीहरू ग्राहक सेवामा बेवास्ता देखिन्छन् किनकि तिनीहरूसँग सीधा नियन्त्रण छैन। जहाँसम्म तपाईं यो सही हुनुहुन्छ कि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मार्केटिंग उपकरण हो, विशेष गरी जब तपाईं लोभ्याइएको शब्द-अनुहारमा कारक गर्नुहुन्छ।
जनवरी १, २०१ 18 १२::2010 अपराह्न
यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि तपाईसँग राम्रो ग्राहक सेवा हुनुपर्दछ, यो स्पष्ट रूपमा छैन, कति कम्पनीहरुसँग वास्तवमै राम्रो सेवा छ भन्ने कुराको आधारमा न्याय गर्दै।
टम - आँखा सहयोगी